Imveliso yeTshayina yeTyuwa kunye nePepper Grinder Mill kunye nabaxhasi | IHoyer
Ityuwa kunye nePepper Grinder Mill
Ityuwa yanamhlanje yeglasi kunye nepepile yigreyidi - emnandi kwaye iyathandeka kwezi gradi zetyuwa kunye nepepile zinokungqina okubonakalayo, umphambili wesinyithi ongenazintsimbi, kunye nebreyithi yentsimbi ephathekayo. Yongeza into enambithekayo ekhitshini okanye kwitafile yokutyela.
Ukuphakama: 195mm / 7.7 intshi
Ububanzi: I-65mm / 2.6 intshi
obunye ubungakanani obufumanekayo: ngokweemfuno zakho
Umbala: icace okanye ngokwemfuno yakho
Uyilo olulula, oluhlengahlengiswayo loyilo-iseteki yethu yokutshisa ityuwa kunye neetingi zepepper yesitshisi inomlinganiso we-ceramic ngomatshini ohlengahlengiso olukhawulezayo phezulu okuvumela ukuba uguquke phakathi kwe-Ultra-entle okanye ukugaya okumanyumnyezi ukuvelisa ngokugqibeleleyo ityuwa yaselwandle yeHimalayan okanye ipepile.
Ukugcwalisa kwakhona, akusekho kugrumba-le insimbi engenazintsimbi igcwalisa ityuwa kunye nepepper yokwenza kube lula ukongeza ityuwa entsha, ipepile, okanye iziqholo ngaphandle kokubangela udideko. Ilungele ukuzisebenzisa ukulungiselela isidlo, dine yonke imihla okanye ukupheka kwindawo yokutyela.
Akukho bhetri, akukho ngxolo kunye neenkqubo zokugaya ezinzima, zomelele ngakumbi kuneziqwengana zezinongo eziqhelekileyo.
Umgangatho wexabiso lomgangatho othembekileyo- sinikezela ngeetyiwa kunye neepepile, kusetyenziswa izixhobo ezisemgangathweni, zomelele, zinesitayile kwaye ziqinile. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngaphambi okanye emva kokuthenga, nceda unxibelelane nathi kwaye siya kubonelela ngenkxaso yabathengi engalinganiyo.
Yonwabela ityuwa entsha yeHimalayan kunye nepepile yomhlaba ngeziqholo zeglasi
Iziqholo ozifakayo kukutya kwakho zingenza ukuba zingcamle zahluke ngokupheleleyo, ngakumbi ityiwa nepepile. Uyisebenzisa ekhitshini, etafileni, xa upheka kwi-grill. Kungenxa yoko ufuna indlela elula kunye nesitayile yokongeza incasa elungileyo ngaphandle kobunzima obugqithisileyo. Iityuwa kunye neepepile ziyenziwa ngeebhotile zeglasi, izinto ezingama-304 zentsimbi ezingenasici, kunye nezixhobo ezenziwe ngesandla ezenziwe ngobumba, zibenza bathandeke kwaye kulula ukuzisebenzisa, nokuba ulungiselela isidlo sangokuhlwa esineentliziyo okanye ukongeza incasa yakho kwisidlo osithandayo. .
I-grress ye-ceramic enzima
Sisebenzisa inkqubo yokugaya eyenziwe yomdaka eqinileyo, enganyangekiyo ngenxa yokugqwala, ukunganyangekiyo kwaye kulula ukuyihlengahlengisa, ikunika amava afanelekileyo okugaya.
Iseti entle yokwenzisa indlu
Ezi zinetyiwa zinexabiso eliphakamileyo zentsimbi kunye nepepile sisipho esikhulu ekhitshini nesakho nabanye ngamanye amaxesha akhethekileyo, kukwenza ukuba uthande ikhitshi kwaye ulonwabele ixesha lokupheka.
Ukucoca ngokulula kunye nokugcina
Iigrows zethu zilula ukudibanisa kunye nokudibanisa, ngoko unokuzihlaziya ngokulula okanye uzihlambulule. Olu luluvo oluhle kwiintsapho ezixakekileyo.
Ngokungafaniyo nezinye izikrini ezivumayo okanye izinto zokugungxula ezithi zibambe okanye zibangele ukudideka, zisasaza ityiwa okanye ipepile kuphela xa ungasebenzisi umsebenzi wokugaya.
Smart, imilo ye-ergonomic
Uyilo oluphezulu, olulula lokuzibambisa lwenza kube lula ukubamba ngesandla esinye, ukugraya ngesinye isandla, nkqu nezo zinamandla asezantsi okubambisa.
Ubungakanani Ukuphakama: 19.5 / 13.5 cmUbubanzi: 6.5 cm Ukuphakama: 7.7 / 5.3 intshiUbubanzi: 2,6 intshi
Umbala icace Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
I-MOQ Ii-5,000 zee-pcs Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Umzekelo a. iisampulu esitokhweni:I-QTY: 1-5 ii-pcsIindleko: zinikezwe ngokukhululekileyo
b. iisampuli ezenziwe ngokwezifiso:QTY: ngokwemfuno yakhoIxabiso: ngokwendlela ethile yoyilo kunye nemveliso
Edlulileyo: I-500ml I-Oile emnyama kunye neViniga Cruet eneziphuli kunye noMsebenzi
Okulandelayo: I-4 ye-Spice yeGlasi ye-oz Spice eneelebuli zeKhabodi kunye neLize yensimbi engenanto
ityiwa kunye nepepile ibhotile yamanzi
ityiwa kunye nebhotile yepelesi
ityiwa kunye nepepile yesiselo sebhotile
ibhotile ye-oyile yentsimbi
I-4 ye-Spice ye-Glass Shaker eneLebhu yeBhodi ...
I-500ml I-oyile emdaka emdaka kunye neViniga Cruet ene ...
Ijar yokugcina iglasi yokuGcina, iJar yokutya yeGlasi nge ...